Kulan dhaqanka lagu xoojinayo oo Muqdisho lagu qabtay – Radio Muqdisho
Kulan dhaqanka lagu xoojinayo oo Muqdisho lagu qabtay
Munaasabad lagu furayay ololaha nooleynta hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo ay soo qaban qaabiyay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, ayadoo munaasabada ay ka soo qeyb galeen qaar ka mid ah guddoomiyayaasha degmooyinka gobolka Banaadir, wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo masuuliyiin kale.
Kooxda Ubaxa (Carruurta heesta) ee degmada Boondheere iyo kooxda fannaaniinta Onkod ee ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ayaa inta ay socotay munaasabada ku soo bandhigay goobta heeso lagu dhiira galinayay wanaagga hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, ayagoo muujiyay qiimaha ay u leedahay Soomaalida dhowrista iyo xoojinta hidaha iyo dhaqanka soo jireenka ah.
Guddoomiyaha degmada Boondheere ee gobolka Banaadir Qaasim Cabdullaahi Xasan oo ka hadlay halkaasi ayaa ugu mahad celiyay mas’uuliyiinta wasaarada warfaafinta dowrka ay ka qaadaneyso nooleynta hidaha iyo dhaqanka soomaaoiyeed, isagoo dhinaca kale tilmaamay in bulshada deggan Boondheere ay dhaqanka si wanaagsan u ilaalilaan marka laga hadlayo dadka ku nool gobolka Banaadir.
Abwan Maxamuud Cabdullaahi Singub oo ka hadlay munaasabada ayaa ka warbixiyay kaalinta uu dhaqanku ugu jiro bulshada Soomaaliyeed. “Hiddo iyo dhaqan waa kala labo, Hidduhu waa maalinle laakin dhaqanku waa ka duwan yahay” ayuu yiri Abwaan Singub
Gudoomiye ku xigeenka dhinaca siyaasada maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye oo ka hadlay munaasabada ayaa ku booriyay shacabka soomaaliyed inay xoojiyaan nooleynta hiddaha iyo dhaqanka. Wuxuu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu ka qeyb qaadanayo xoojinta iyo ilaalinta dhaqanka Soomaaliyeed.
Wasiir ku-xigeenka wasaarada warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumada Soomaaliya Cabdullaahi Colaad Rooble oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in barnaamijkan looga gol leeyahay xoointa iyo ilaalinta hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, isagoo intaa ku daray in wasaaraddu ay waqti badan ku bixin doonto arrintaan.
“Xukuumadda guud ahaan iyo wasaaraddanba xil ayaa ka saaran ilaalinta hiddaha iyo dhaqanka ummadda, mashruucaan arrintas ayuu qeyb ka yahay” ayuu yiri Colaad.
Wasaaradda Warfaafinta ayaa dhowr jeer qabatay munaasabado sidaan oo kale ah. Barnaamijkaan ayaa la gaarsiin doonaa dhammaan gobollada dalka sida ay aqiijiyeen masuuliyiinta wasaaradda Warfaafinta, Hiddaha iyo dalkxiisa.
BOOSAASO: Kooxo hubeysan oo weeraray fadhiisn ciidan
John Kerry: “Xeryaha qaxootiga waxaa loogu talo galay inay noqdaan kumeel-gaar”
John Kerry: "Xeryaha qaxootiga waxaa loogu talo galay inay noqdaan kumeel-gaar"